भर्खर आउनुहोस् तपाई जस्तो हुनुहुन्छ! , विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
बिली ग्राहम प्रायः एक अभिव्यक्ति प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई येशूमा भएको छुटकारा स्वीकार्न प्रोत्साहित गर्दछन्: उनले भने, "तिमी जस्तो छौ त्यस्तै आउनुहोस्!" यो एक रिमाइन्डर हो कि परमेश्वरले सबै कुरा देख्नुहुन्छ: हाम्रो उत्तम र सबैभन्दा खराब, र अझै उसले हामीलाई प्रेम गर्दछ। कल "केवल तिमी जस्तै गरी आउ" भन्ने कुराले प्रेरित पावलका शब्दहरू झल्काउँछ।
«किनकि जब हामी अझै कमजोर थियौं त्यसबेला ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। अब धर्मीको खातिर कोही पनि मर्दछन्; सायद राम्रोको लागि उसले आफ्नो जीवनलाई हिम्मत गर्दछ। तर जब हामी पापी थियौं, हाम्रो निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो भन्ने तथ्यलाई परमेश्वर हामीलाई देखाउनुहुन्छ। (रोमी .5,6.२8-२XNUMX)
आज धेरै मानिसहरू पापको बारेमा सोच्दैनन्। हाम्रो आधुनिक र उत्तर आधुनिक पीढीले "शून्यता", "हताशता" वा "मूर्खता" को भावनाको हिसाबले अधिक सोच्दछ, र तिनीहरूले हीन भावनाको भावनामा उनीहरूको आन्तरिक संघर्षको कारण देख्दछन्। तिनीहरूले आफूलाई मायाको बन्ने साधनको रूपमा आफैलाई प्रेम गर्ने प्रयास गर्न सक्दछन्, तर अधिक सम्भावना नभए झैं उनीहरू पूर्ण रूपमा बिग्रिएको, टुक्रिएको महसुस गर्छन् र उनीहरू फेरि कहिल्यै सुरक्षित हुनेछैनन् भन्ने महसुस गर्छन्। हाम्रो कमी र असफलताहरूको बीचमा भगवानले हामीलाई परिभाषित गर्नुहुन्न; उसले हाम्रो सम्पूर्ण जीवन देख्छ। राम्रो को रूप मा नराम्रो र उसले हामीलाई बिना शर्त प्रेम गर्दछ। भगवान्‌ले हामीलाई माया गर्नु गाह्रो छैन भने पनि हामीलाई यो प्रेम स्वीकार्न गाह्रो लाग्छ। हामीलाई गहिरो रूपमा थाहा छ कि हामी यो प्रेमको योग्य छैनौं।
१ 15 औं शताब्दीमा, मार्टिन लुथरले नैतिक तवरमा सिद्ध जीवन बिताउन गाह्रो संघर्ष गरे। उनले लगातार फेला पारे कि ऊ असफल भइरहेको थियो। निराश भएर उनले अन्तमा परमेश्वरको अनुग्रहमा स्वतन्त्रता पाए। त्यतिन्जेल, लुथरले आफ्ना पापहरू पहिचान गरिसकेका थिए - र निराश मात्र भएको थियो - येशूसँग परिचित हुनुको सट्टा, परमेश्वरको त्रुटिरहित र प्यारो छोरा, जसले लुथरका पापलगायत संसारका पापहरू हटाइदिए।
भगवान तपाईंलाई माया गर्नुहुन्छ। यदि भगवानले उसको मुटुबाट पाप घृणा गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँ तपाईंलाई घृणा गर्नुहुन्न। परमेश्वर सबै मानिसहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। उसले पापलाई एकदमै घृणा गर्दछ किनभने यसले मानिसहरूलाई चोट पुर्‍याउँछ र नष्ट गर्दछ।
"तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै आउनुहोस्" मतलब भगवान तपाईं उहाँमा आउनु अघि उहाँ अझ राम्रो हुनको लागि कुर्दै हुनुहुन्न। उसले पहिले नै तपाईंलाई माया गर्‍यो, तपाईंले जे गर्नुभयो पनि। येशू परमेश्वरको राज्यभित्र पस्ने एउटा निश्चित तरिका र तिनीहरूको सबै आवश्यकताको उत्तम मद्दत हुनुहुन्छ। यो के हो जसले तपाईंलाई परमेश्वरको प्रेमको अनुभवको अनुभवबाट रोक्दछ? जे भए पनि: यो भार येशूमा सुम्पनुहोस्, के यो तपाईंको ठाउँमा बोक्ने क्षमता भन्दा बढी छ?